सलमान खान काँग्रेसबाट चुनाव लड्दै ! - Lekbesi Khabar
सलमान खान काँग्रेसबाट चुनाव लड्दै !
काठमाडौं । बलिउडका नायक सलमान खान काँग्रेस पार्टीबाट चुनाव लड्ने सम्भावना देखिएको छ । काँग्रेसले उनलाई टिकट दिने विषय बाहिर सार्वजनिक गरेपछि उनी सक्रिय राजनीतिमा आउने सम्भावना बढेको हो ।
सुमित्रा महाजन लगातार ९ पटक सम्म सांसद बनिसकेकी नेता हुन् । सोही कारण सलमानलाई सो इन्दोरमा उठाउन सकेमा सुमित्राको अराजित यात्रामाथि धावा बोल्न सक्ने अपेक्षा देखिन्छ । सलमान खानको पैत्रिक घर पनि इन्दोर नै रहेकोले पनि उनी सो क्षेत्रबाट उठ्न सक्ने सम्भावनाबारे पनि चर्चा भईरहेको देखिन्छ । @hamrakura.com
२७ फाल्गुन २०७५, सोमबार १०:०८ March 11, 2019
को हुन् इथोपियन एयरलाइन्स दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने एकता अधिकारी ?
यौनजन्य क्रियाकलापमा होचा पुरुष अब्बल